Shirkada Samsung oo shaacisay in ay soo saartay qalab ay ka naxeen Tuugada inta badan Moobelada Xada | warsugansomaliya.wordpress.com
Shirkada Samsung oo shaacisay in ay soo saartay qalab ay ka naxeen Tuugada inta badan Moobelada Xada
Shirkadda Samsung oo ku caan ah inay soo saarto qalabada tiknoolajiga ah, gaar ahaan moobilada casriga ah ayaa shaacisya in ay soo saarayso aalad lagu rakibayo telefoonnada gacanta oo saamaxaysa in ay hawada ka saarto haddii telefoonka laga xado mulkilihii lahaa.
Qalabkan oo ay u bixiyeen dilaaga shidaha (kill Switch) waxa moobilada Samsung lagu shubo doona dhawaan.
Arrintan waxay timi kadib markii shirkadda Apple bishii hore ku dhawaaqday inay telefoonnadeeda gacanta ee casrig aah lagu xidhi doono badhan hawada ka saraaya haddii qofkii lahaa moobilka laga xado.
Labadan shirkadood ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya, isla markaana suuqyada ku tartamaaya ayaa doonaya in midba mida kale suuqa ka saarto alaabta ay soo saaraan.
Tuugta caanka ku ah moobilada ayaa lagu yaqaan inay jabsadaan dhammaan wax kasta oo uu qofku amni ahaan ugu xidho, balse qalabkan wuxuu saamixi doona in tuugto carqalad kala kulmaan xadista telefoonnada, maadaama moobaylku sida uu u dhan yahay uu hawada ka baxaayo.
Dalka Ingiriiska sannadkii hore waxa ka dhacay 100,000 (boqol kun) oo kiis oo ku saabsan xatooyada moobaylka, waxaanay siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah khaatiyaan ka taagan yihiin dadka ugaadhsada telefoonnada casriga ah.
Ciidammada booliska Ingiriiska iyo Maraykankuna waxay sheegeen in kiisaska ugu badan ee ay diiwaangeliyaan yihiin xatooyada telefoonnada gacanta, gaar ahaan kuwa shirkadaha Samsung iyo Apple oo ah kuwo casri ah oo inta badan aad uga socda suuqyada adduunka.
← Mareeykanka hadii uu dalka Syria weeraro maxaad kala socotaa wadamada Quwada leh ee weerarkaas.
Aqriso Shanta Qodob ee diirada lagu saarayo Shirweynaha Qaran ee Muqdisho ka furmay iyo Madaxweynaha oo Khudbad ka jeediyay →